Father Cloudy Maganga
Vedzisvondo, kanzuru yeHarare, vagari, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nemamwe mapazi ehurumende vasangana muHarare pa St Canisius Catholic Church mumusha weMarlborough vachizeya nzira dzavangashandise kuderedza kushandiswa kwezvinodhaka zvakaita sehwahwa, mishonga, mbanje kana nezvimwe zvinonzi zvatekeshera muguta reHarare pamwe nedzimwe nzvimbo.
Baba Maganga vanoti nyanzvi munyaya dzehutano, mishonga pamwe nemapurisa vauya vakapa humbowo maererano nekushata kwekushandisa zvinodhaka kupfurikidza mwero uye vafara chose kuti vechidiki pamwe nevabereki vavo vapinda mumusangano wanhasi.
Muimbi ane mukurumbira, VaVictor Kunonga, uyo apinda mumusangano wanhasi audza Studio7 kuti kusangana kwavaita kwakakosha chose mukupedza dambudziko rekushandisa zvinodhaka munharaunda yavo.
Ati chinorwadzwa ndechekuti dambudziko iri riri kukura kune vechidiki izvo zvave kukanganisa remangwana ravo.
VaKunonga vati zvinosuwisawo kuti zvinodhaka zvave kuwanikwa pose pose uye vati izvi zvinofanira kugadziriswa.
Vange vakamirira mapurisa, VaMajaha Mkwananzi, avo vanoshandira mubazi remapurisa rinoona nezvezvinodhaka kana kuti Drugs and Narcotics muCriminal Investigations Department, vati nyaya yekudhakwa zvekupfurikidza mwero pamwe nekushandisa zvimwe zvisingabvumidzwe yanyanyisa munyika.
Vati semapurisa vari kuedza napose pavanogona napo kupedza dambudziko iri uyewo vati vanofara chose nedanho riri kutorwa nekanzuru yeHarare mukuparadza nzvimbo dzinotengeswa zvinodhaka zvisiri pamutemo.
Mumiriri weMbare muparamende, VaStarman Chamisa, vaudza Studio7 kuti vanotsigira hurongwa hwekuderedza kana kupedza nyaya dzekudhakwa zvisiri pamwero munyika.
Kanzura weWard 41 muHarare, Amai Kudzai Kadzombe, vatiwo zvinosuwisa kuti vanhu vakawanda muHarare vave kushandisa zvinodhaka kuvharidzira matambudziko avo.
Vati kanzuro yeHarare ichashanda nemapurisa nemapazi ese ehurumende mukupedza dambudziko iri.
Bazi rezvehutano, sangano reMedicines Control Authority of Zimbabwe nemasangano anoshanda akazvimirira vapindawo mumusangano uyu.
Chimwe chisungo chabuda mumusangano wanhasindechekuti mapazi ehurumende anoshandira kunzvimbo dzinopinda nezvinhu munyika anofanira kushanda zvakasimba mukudzivirira kupinda kwezvinodhaka munyika.